एउटा नटवर लालको अवसान पश्चात ढटुवारलालको शासन शुरु ? – Sunuwar.org
एउटा नटवर लालको अवसान पश्चात ढटुवारलालको शासन शुरु ?
केपी नम्बर वान नटवरलाल देखिए । नटवारलाल भन्ने धुर्त ठग रहेछ । ठगीको अपराधमा जेलको सजाय मुक्त भएर जेल बाहिर आउँदा जेलरलाई नै जेल विक्रि गरेर ठग्ने काम गरे जसले नटवरलाल चर्चित भए जस्तै के पी ले झुटमुठको खेतिले जनता र देशलाई अन्तत्व ठग्न कुनै कसर राखेका छैनन् । पछि थाहा हुँदै जानेछ असली कुराहरु ।
म मधेश आन्दोलनको मानव अधिकार अनुगमनको सिलसिलामा भारदह जहाँ निर्दोष राजिव राउतलाई गोली हानेर मारिएको थियो सुरक्षाकर्मीहरुबाट । त्याँहा जनताले मार ओली मार कति मार्छस् मधेशीलाई भन्दै जनताले आक्रोस् व्यक्त गरेको अझै ताजै छ मेरो मश्तिष्कमा । भदौ ७ को कैलाली घटना पछाडी थारुहरुलाई घरघरबाट लखेटेको, झुट्टा मुद्दा लगाएको थारु भएकै आधारमा अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको । निर्दोष ५८ जनालाई ज्यानमुद्दा, ज्यान मार्ने उद्योग र ढाका मुद्दा लगाईएको छ । १२३ जनाको नाममात्र फरार सूचीमा छ । जो पायो त्यसलाई समात्न मिल्ने गरी मुद्दा बनाएर राज्य आतंक सृजना गरेको छ कैलाली र टिकापूरमा । हो ७ जना प्रहरीको दुखद मृत्यू भएको छ । तर कसरी त्यो घट्ना घट्यो राज्यले स्वतन्त्र आयोग हालसम्म बनाएको छैन । बास्तविकता आजसम्म ल्याइएको छैन । किन विना तयारी सुरक्षाकर्मी पठाइयो त्यस ठाउँमा वा त्यसभन्दा पहिला कहिल्यै नघटेको घट्ना किन त्यस दिन नै घट्यो ? शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा कसरी त्यसतो घट्ना घटयो? कतै धानखाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो त भएको छैन ? राज्य यसरी लागेको छ थारुको विरुद्धमा मानौ थारु भएर जन्मनै नै यो देशमा अपराध हो ।
संविधान बनेपछि राज्यले निर्दोष मधेशी जनताहरुको ज्यान लिएको छ । बालबालिकामाथि गोली प्रहार भएको छ । यी घटना अन्तराष्ट्रिय कानूनको नजरमा जनसंहार र मानवता विरोधी अपराध हो । त्यसको कुनै छानवीन भएको छैन । केपीको शासन तथाकथित राष्ट्रबादको नारा उरालेर आफ्ना काला कर्तुत ढाक्नमा नै व्यस्त भए । निकै सहयोग गरे नश्लबादी मिडिया र पक्षपाति हरुले । ती नश्लबादको पृष्टपोषण गर्ने आदिवासी र मधेशीहरु पनि त्यतिकै रहे को को रहे? भखैरै सदनमा रोदन गर्नेहरु हेर्दा निकै रहेछछन् बागडबिल्लाहरुभन्ने थाहा पाइयो ।
तर आदिवासी जनजाति र मधेशीको कत्लेआम गर्ने खेलमा संविधान जारी गर्न १६ बुँदे सहमति कायम गर्नेहरु (एमाले, काँग्रेस र माओबादी ) नै हुन् । त्यसैले त यो संविधान तीन पार्टीको संविधान हो जनताको होइन ।
माओबादी जनयुद्धका महानायक पुष्पकमल दाहाल कसैका लागि मसिहा होलान् । राम्रा काम पनि गरेका होलान् । तर आदिवासी जनजाति र मधेशीलाई धोका दिएकै हुन् । जनयुद्धताकाका मुद्दा छाड्ने र ३३ दलीय गठबन्धनलाई लत्याएर आफ्ना अनुजहरुसँग घाँटी जोडेका पुष्पकमल अहिले फेरि आदिवासी जनजाति, थारु र मधेशीका कुरा उठाएका छन् अविश्वासको प्रस्तावमा । तर त्यो तपसीलमा राखिएको छ मुख्य एजेण्डामा होइन । उनै हुँदैछन् प्रधानमन्त्री काँग्रेसको समर्थनमा । ब्यक्तिगतरुपमा मान्छेहरु ठीकै होलान् तर राजनीतिकरुमा केपी नटवरलाल हुन भने पुष्पकमल दाहाल ढँटवरलाल हुन् ।
उनी पछि शेरबहादुर देउबाको पालो रे प्रधान मन्त्री हुने । यो बाहुन क्षेत्रीको राज निरन्तर नै जाने भएकोले आदिवासी जनजाति र मधेशीले के पाउँछन् हेर्न बाँकी नै छ । थारुहरुको मुद्दा झन पेचिलो हुनेछ । किनकि शेरबहादुर देउवा र माओबादीका लेखराज भट्ट नै हुन थरुहट विरुद्ध अखण्ड शुदुर पश्चिमका पक्षपातिहरुलाई ताउ दिने । कहिलेसम्म हो नटरवलाल र ढँटवारलालहरुको शासनको घनचक्करमा पर्ने आदिवासी जनजाति र मधेशीहरु ?
« आदिवासीको आप्mनै सन्चार इन्डिजिनिअस टि.भि. आजबाट
विश्व आदिवासी दिवसको मुल नारा : शिक्षामा आदिवासी जनजातिको अधिकार »